အချစ်ရေးခိုင်မြဲစေဖို့ အများကြီးတွေးတောစဉ်းစားနေဖို့မလိုပါဘူး…. – Trend.com.mm
Posted on February 22, 2019 by Noel
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြံဥာဏ်တွေမျိုးစုံကိုသင်ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေ သတိထားပြုမူကြတဲ့အချက်လေးတွေကို
သင်သိချင်မှသိမှာပါ။အချစ်ရေးတိုင်းကတော့ တောက်လျှောက်ချောမွေ့နေတယ်ရယ်တော့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ? ဆူးခင်းလမ်းနဲ့ပန်းခင်းလမ်းတစ်လှည့်စီပေါ့။
အချစ်ရေးကို ပိုပြီးသာယာပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးအနေနဲ ဒီအချက်လေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်။
ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန် လူဆိုတာအမှားလုပ်မိတတ်ပါတယ်။စကားအပြောအဆို၊ကိုယ်အမူအရာတစ်ခုခုမှားသွားနိုင်ပြီး စိတ်ပြန်ငြိမ်တဲ့အခါမှာတော့
ဒါတွေက ပြင်ရခက်ပါတယ်။ဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်စေ ကိုယ်ဒေါသထွက်လာပြီ သူဒေါသထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်သား
ဘာစကားမှမပြောပါနဲ့တော့။ဖြစ်နိုင်ရင် ၂၄ နာရီလောက် ဘာတုံ့ပြန်မှုမှမလုပ်ပါနဲ့။နောက်ပိုင်းဆို သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်လို့
ဥပမာ သင့်ချစ်သူက ဘယ်နေရာမှာသွားစားကြမလဲမေးရင် အဆင်ပြေတဲ့ဆိုင်သွား၊အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာစားမယ်စသဖြင့် ပြောတာမျိုးပေါ့။ဒါက
အမြဲတမ်းဆို မကောင်းပါဘူး။ချစ်သူက စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာပြောဆိုပေမဲ့ သင့်ဘက်က အဆင်ပြေသလိုလုပ်လေဆိုတဲ့စကားက စိတ်မပါသလို
ဖြစ်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ဟိုဆိုင်လေးမှာစားရရင်ကောင်းမယ်။ဒီအလုပ်လေးလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ် အဲ့လိုမျိုးရှိမှ အချစ်ရေးကလည်း နွေးထွေးမှာပါ။သူတို့ကိုပဲ အမြဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းနေမယ်ဆိုရင် အချစ်ရေးက တုံ့ပြန်မှုမရှိအေးစက်စက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်လေ မိန်းကလေးတစ်ချို့၊ယောက်ျားလေးတစ်ချို့က ချစ်သူကိုအရွဲ့တိုက်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုအရွဲ့တိုက်လို့ အချစ်ရေးပြန်အဆင်ပြေသွားတဲ့
ရာခိုင်နှုန်းက နည်းပါတယ်။သူလုပ်တိုင်း ကိုယ်လိုက်လုပ်မယ်။သူအပြင်ခိုးသွားတိုင်း ငါလည်းအပြင်ခိုးသွားမယ်စသဖြင့် အရွဲ့တိုက်နေမယ်ဆိုရင်
အချစ်ရေးကပိုပြီးဆိုးလာမှာပါ။နှစ်ယောက်လုံးက မာနခဲတွေဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတော့တာပါပဲ။တစ်ယောက်ကတင်းရင် တစ်ယောက်ကလျှော့မှ
အဲ့ဒီအချစ်ရေးက အဆင်ပြေမှာပါ။ဒါကြောင့် အရွဲ့မတိုက်ပါနဲ့
အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့ အကွံဉာဏျတှမြေိုးစုံကိုသငျကွားဖူးပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ ပြျောရှငျသာယာတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှေ သတိထားပွုမူကွတဲ့အခကျြလေးတှကေို
သငျသိခငျြမှသိမှာပါ။အခဈြရေးတိုငျးကတော့ တောကျလြှောကျခြောမှနေ့တေယျရယျတော့ ဘယျရှိပါ့မလဲ? ဆူးခငျးလမျးနဲ့ပနျးခငျးလမျးတဈလှညျ့စီပေါ့။
အခဈြရေးကို ပိုပွီးသာယာပြျောရှငျခငျြတယျဆိုရငျ သငျတို့ခဈြသူနှဈဦးအနနေဲ ဒီအခကျြလေးတှသေိထားဖို့လိုပါတယျ။
ဒေါသထှကျနတေဲ့အခြိနျ လူဆိုတာအမှားလုပျမိတတျပါတယျ။စကားအပွောအဆို၊ကိုယျအမူအရာတဈခုခုမှားသှားနိုငျပွီး စိတျပွနျငွိမျတဲ့အခါမှာတော့
ဒါတှကေ ပွငျရခကျပါတယျ။ဘယျလောကျသေးငယျတဲ့ပွဿနာမြိုးဖွဈစေ ကိုယျဒေါသထှကျလာပွီ သူဒေါသထှကျလာပွီဆိုတာနဲ့ နှဈယောကျသား
ဘာစကားမှမပွောပါနဲ့တော့။ဖွဈနိုငျရငျ ၂၄ နာရီလောကျ ဘာတုံ့ပွနျမှုမှမလုပျပါနဲ့။နောကျပိုငျးဆို သငျတို့နှဈယောကျလုံးစိတျတညျငွိမျသှားပွီဖွဈလို့
ဥပမာ သငျ့ခဈြသူက ဘယျနရောမှာသှားစားကွမလဲမေးရငျ အဆငျပွတေဲ့ဆိုငျသှား၊အဆငျပွတေဲ့နရောမှာစားမယျစသဖွငျ့ ပွောတာမြိုးပေါ့။ဒါက
အမွဲတမျးဆို မကောငျးပါဘူး။ခဈြသူက စိတျဓာတျတကျကွှစှာပွောဆိုပမေဲ့ သငျ့ဘကျက အဆငျပွသေလိုလုပျလဆေိုတဲ့စကားက စိတျမပါသလို
ဖွဈနပေါတယျ။နှဈယောကျသားတိုငျတိုငျပငျပငျနဲ့ ဟိုဆိုငျလေးမှာစားရရငျကောငျးမယျ။ဒီအလုပျလေးလုပျကွညျ့ရငျကောငျးမယျ အဲ့လိုမြိုးရှိမှ အခဈြရေးကလညျး နှေးထှေးမှာပါ။သူတို့ကိုပဲ အမွဲဆုံးဖွတျခကျြခခြိုငျးနမေယျဆိုရငျ အခဈြရေးက တုံ့ပွနျမှုမရှိအေးစကျစကျဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
တဈခါတဈလေ မိနျးကလေးတဈခြို့၊ယောကျြားလေးတဈခြို့က ခဈြသူကိုအရှဲ့တိုကျတတျကွပါတယျ။ဒီလိုအရှဲ့တိုကျလို့ အခဈြရေးပွနျအဆငျပွသှေားတဲ့
ရာခိုငျနှုနျးက နညျးပါတယျ။သူလုပျတိုငျး ကိုယျလိုကျလုပျမယျ။သူအပွငျခိုးသှားတိုငျး ငါလညျးအပွငျခိုးသှားမယျစသဖွငျ့ အရှဲ့တိုကျနမေယျဆိုရငျ
အခဈြရေးကပိုပွီးဆိုးလာမှာပါ။နှဈယောကျလုံးက မာနခဲတှဆေိုရငျတော့ ပိုဆိုးတော့တာပါပဲ။တဈယောကျကတငျးရငျ တဈယောကျကလြှော့မှ
အဲ့ဒီအခဈြရေးက အဆငျပွမှောပါ။ဒါကွောငျ့ အရှဲ့မတိုကျပါနဲ့